Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal प्रधानन्यायाधीशलाई राजदूतमा पनि भाग ! - Pnpkhabar.com
काठमाडौँ, असोज २५ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्।
उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन् ।
राणाकी छोरी रावलका छोराले बिहे गरेका हुन्। सरकारले भारतलगायतका देशबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी भएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।